Tababaraha Real Madrid Mourinho Oo Ku Tilmaamay Ronaldo Inuu Yahay “Special Player” - jornalizem
Tababaraha Real Madrid Mourinho Oo Ku Tilmaamay Ronaldo Inuu Yahay “Special Player”
Tababaraha Real Madrid Jose Mourinho ayaa ku timaamay Cristaino Ronaldo inuu yahay “Special Player” kadib markii uu weeraryahankan uu sheegay inuusan ku faraxsanayn la joogida kooxda Real Madrid.
Tababaraha Real Madrid ayaa waxa uu sii qota dheer uga hadlay arrimaha gooldhaliyaha rikoorka jebiyey kadib markii uu Axadii aynu ka soo gudubnay shaaciyey inay murugo ku hayso Santiago Bernabeu isla markaana ay kooxdu sababteeda ogtahay.
“Waxaad halkan ka tahay laacib weyn,”ayuu Mourinho ku tilmaamay Ronaldo kadib wareysi ay la yeelatay idaacada Marca. “Shaki iigama jiro taas, waa inaan cadeynaa,aad ayaad noo faraxgelisey waxaadna u baahan tahay in lagu jeclaado.
Iyadoo ay tahay markii ugu horeysey ee uu ka hadlo Mourinho arrimaha wararka kala duwan laga sheegay in Ronaldo ayuu intaasi ku sii daray:
“Aad ayaan kuu jecel nahay, waxana aan kaa caawineynaa waxkasta oo aad u baahan tahay. Waxbadan ayaana hadli doonaa marka aad ka soo laabatid waajibaadkaaga qaran. Balse waa inaad cadeysaa, waxaan halkan u joognaa inaan dhagaysano kuna caawino.”
Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxayay sababta keentay in 27-jirkan uusan ku qanacsanayn caasimada dalka Spain. Dadka qaar ayaa aaminsan inuusan la dhacsanayn sida ay Los Blancos ula dhaqantay ciyaaryahanka ay isku kooxda yihiiin ee Kaka, qaar kalana waxa ay arrinka ku sheegeen inay tahay uun isagoo doonaya heshiis cusub in uu la galo kooxda.